Ndabere azumazu ụlọ sistemụ maka sistemụ BCMseries - China Backwashing sistemụ ụlọ akpaka sistemụ ụlọ BCMseries, actorylọ ọrụ –Sffiltech
Sistem nhicha ụlọ zuru oke na-edozi onwe ya
Full akpaka azụ ịsa nzacha ụlọ ụlọ usoro
BCM zuru oke azụ ịsa ahụ nzacha na-edozi maka adabara elu mmiri, nnukwu ọsọ, viscosity fluid pat element fluid.
Principlekpụrụ ọrụ nke BCM zuru oke azụ ịsa ahụ na-asa ụlọ:
Mmiri mmiri a na-asọpụta na-asọpụta site na mmiri banye na ụlọ nzacha ahụ, wee gafere ebe a na-edozi ya n'ime ụlọ nzacha ahụ, mmiri mmiri na-esi na mmiri ahụ wee banye n'ime mpụga, wee si na mpụga arịa ahụ pụta; Ihe ndị sitere n ’ịsa ahụ na-asa ahụ na-apụta site na nsị mmiri.
Mgbe mmiri na-agafe n’ime usoro nzacha ahụ, ihe ahụ siri ike ga-atọ n’akụkụ ime nke ihe nzacha ahụ. Site na mmụba nke mmetọ, nrụgide dị iche n'etiti akụkụ mmerụ ahụ na akụkụ dị ọcha nke nzacha ahụ na-eji nwayọọ nwayọọ na-abawanye. Mgbe nrụgide ọdịiche ruru ogo setịpụrụ, mita nrụgide dị iche na-eziga ozi yana ụlọ nzacha ahụ na-amalite usoro ịsacha akpaka.
usoro ịsa ahụ:
1.Gear moto na - akwọ ogwe aka ịsa ahụ ka ọ tụgharịa site na jaịshasha, a na - atụgharị ya n'akụkụ ntụgharị nke ogwe aka ya, nke a ga - eme ka ọ dabara na nzacha ahụ dị ọcha.
A na-emepe valvụ na-agbapụta, yabụ na nrụgide dị iche ga-etolite n'etiti ihe nzacha nke mpụga (akụkụ dị ọcha) na nsị ikuku.
3.Mgbe nrụpụta nrụgide dị iche iche, mmiri mmiri nke dị ọcha ga-asọpụta site na nzacha ahụ asachapụ n’ime ya n’ime iji mee ka usoro ịsachasị mmiri dị ọcha ga-asachapụ ma kpochapu ihe nzacha ahụ. nsị nsị.
4.Atọala ịsacha azụ nke nhicha ọ bụla, yabụ mgbe oge ịsa ahụ ga-eru, ikuku na-ewepụta ikuku ga-adị nso, ma mekwaa ka azụsịa nke nzacha ndị a pụta, mgbe ahụ gasị ga-akwọ aka ịsacha aka tụgharịa ọzọ, na-ebugharị ịsa ahụ ọzọ maka nzacha nzacha ọzọ, ebe a na-agba mmiri mmiri ga-emeghe ọzọ.
5. Emechara nhicha nhicha ahụ, ogwe aka na-asa ahụ laghachiri n'ọnọdụ mbụ n'okpuru njikwa nke ngbanwe fotoelectric, nke pụtara okirikiri ịsa ahụ akwụsị.
6.N'ihi na azu azu na asa aru nke ihe nzacha n'aka, yabụ n'oge usoro a ga - enwe ike dobe steeti mmiri ocha.
Weghachite azụ ịsa ahụ:
1. Ntọala nrụgide dị iche iche: nzacha ahụ nwere nlele nrụgide dịgasị iche, nke a na-eji tọọ mgbanye nrụgide dị iche.
Ntọala oge: igbe nchịkwa nwere ngwaọrụ ịtọ oge, nke enwere ike iji weghachite usoro ịsa ahụ dị ka ihe ndị ọrụ chọrọ si dị. Ntọala nrụgide dị iche na idozi oge bụ nhazi azụ ịsa ahụ na akpaghị aka, ntọala abụọ ahụ dị n'otu oge, ebe nrụgide dị tupu.
3.Mapụta mbido: Na mgbakwunye na ọnọdụ nrụgide dị iche na oge ịtọlite ​​akpịrị ịsa ahụ aka, enwerekwa igodo TEST iji aka wee bido usoro a, nke a na-eji maka ịmecha ma na-arụzi ya.
Ihe ngosi imewe nke BCM zuru oke azuma ulo na-asa nzacha nzacha:
1.The sistemu eji arụ ọrụ n’ime ya na teknụzụ ndị eji eme ihe, na-achọpụta ọrụ ịsa ahụ azụ n’ezie n’echiche, nke nwere ike wepu adịghị mma nhicha, na-asacha akụkụ niile na-enweghị isi nwụrụ anwụ, na-efe efe n’enweghi mmachi, ma na-ekwe nkwa idozi nke ọma na ogologo ọrụ ogologo. .
Akụrụngwa 2.Filter na-ahọrọ 304, 316L, 2205, ihe MONEL wedge filter element, yana uru nke nnukwu ike, nkenke dị elu, nguzogide corrosion, na ezigbo nzacha zuru oke ruru 25 microns.
3.Mgbe ọrụ ya ga-arụpụta, akụrụngwa na-ahụ maka ihe nwere ike mezue ịsa ahụ na akpaghị aka, ma nwee ike imeri mgbanwe dị mma na mmiri na-enweghị enyemaka.
Usoro njikwa akụrụngwa dị mfe, ọrụ ziri ezi, ma nwee ike idozi nsogbu dị iche iche na ịtọ ntọala oge ịsacha azụ dabere na mmiri dị iche iche na nzipụta ziri ezi.
5.Site usoro ịsa ahụ azụ, a na-eduzi arịa nke nzacha ọ bụla na ntinye n'aka; nke a na –eme ka nchekwa ihuenyo nzacha, nhicha ọfụma, ebe ihe nzacha ndị ọzọ anaghị emetụta ma na-aga n'ihu ịdacha.
Ngwongwo 6.Filtering nwere akụkụ ndi na-adighi ike, enweghi ihe a na-eri eri, nke nwere obere oru na ndozi ya na oru na nhazi oru di nfe.
A na-emepụta komputa ihe eji eme ihe ọfụma ma nwee ezi uche, yana obere nha, nke na-agbanwe agbanwe ma dịkwa mma maka nrụnye na ije.
Ngwa akụrụngwa na-eji valvụ mmiri pneumatic, na obere oge nke ịsa ahụ, obere mmiri, nchekwa gburugburu na akụ na ụba.
A na-egosipụta steeti na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na ihuenyo mmetụ ahụ, nrụgide dị iche na oge ịchekwa adaba maka nlele.
Mmiri imebi mmiri, na-ekugharị mmiri jụrụ oyi na mmiri ịba ọcha n'anya, mmiri ballast maka ụgbọ mmiri, mmiri na-eme mkpọtụ mmiri, Ultrafiltration azụ osmosis filtration, ion mgbanwe pretreatment, Paper nozzle filter.